ကျမ၏ချစ်လှစွာသော “မောင်” ၏ နောက်နာမည်တစ်ခု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျမ၏ချစ်လှစွာသော “မောင်” ၏ နောက်နာမည်တစ်ခု
ကျမ၏ချစ်လှစွာသော “မောင်” ၏ နောက်နာမည်တစ်ခု
Posted by ရွှေတိုက်စိုး on Sep 17, 2013 in Creative Writing | 28 comments
သူနှင့်ပါတ်သက်ခဲ့သည့် ချစ်သူသက်တမ်း၎နှစ်ပြည့်ပြီးနောက် ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့် ထာဝရလက်တွဲရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး၃နှစ်ပြည့်ခါနီးကာလအတွင်း ကျမပြန်လည်ရရှိလိုက်သောအရာသည် သူ၏ရက်စက်လှသော ဥပက္ခာတရားပင်..။ ကျမပေးဆပ်ခဲ့ရသောကာလများတွင် ဤကဲ့သို့ရက်စက်တတ်သောစိတ်ဓါတ်နှင့် သွေးအေးစွာဖြင့်တိတ်တစိတ် ကျမဘေးနားမှထွက်ခွာသွားလိုသောစိတ်သည် မည်သည့်အချိန်ကတည်းကပင် သူ၏စိတ်တွင် ကိန်းအောင်းနေခဲ့သည်ကို ကျမ, မိုက်မဲစွာမသိရှိခဲ့ပေ..။ ကျမ၏ချစ်လှစွာသော “မောင်” ဘ၀မှ ကျမ မဟုတ်သောအခြားသူတယောက်နှင့် “ကို” ဟူသောဘ၀ကို ပျော်ရွှင်စွာပြောင်းလည်းသွားခဲ့သည်..။ မထင်မှတ်သောအချိန် မထင်မှတ်သောနေ့တွင် ကျမ၏ချစ်လှစွာသောခင်ပွန်းသည်မှ ကျမနောက်ကျောကို ဓါးဖြင့်ထိုးခဲ့လေ၏..။ ယုံကြည်စွာပုံအပ်ထားခဲ့သော စိုးစဉ်းမျှပင်မစဉ်းစားမိခဲ့သောအရာတခုအား ကိုယ်တိုင်ကိုကျတွေ့ရှိခဲ့သည်ကိုပင် မိုက်လုံးကြီးစွာဖြင့် မဖြစ်နိုင်ဘူးဟူ၍ မသိစိတ်ဖြင့်ငြင်းပယ်ခဲ့မိသည်..။ သို့သော် ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက်လည်း ကျမ၏ ဦးနှောက်က လက်သင့်မခံပြန်..။ ရူးလောက်သောခံစားမှုမျိုးကို မရူးရုံတမယ်သာဖြစ်ခဲ့သည်…။ အတူရှိနေခဲ့သည့် ထိုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက် သံယောဇဉ်တစွန်းတစမှ သူ့ရင်ထဲတွင်ကျန်ရှိမနေအောင် ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည့်သူ့ကို ကျမအားကျသည်..။ အမှန်တကယ်တော့ လူသားတယောက်အနေဖြင့် ကိုယ်ချင်းစာတရားမရှိသည့်သူ့အား ကျမ နာကျည်းပါသည်..။
လွန်ခဲ့သော ၇နှစ်ကျော်ကာလက မည်သည့်အရာကြောင့်မိဘရင်ခွင်မှခွာ၍ တခြားနေရာသို့ထွက်ခွာခဲ့သလည်းဟု ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်မေးမိတိုင်းလည်းရင်နာမိသည်..။ သေချင်တဲ့ကျားတောပြောင်းလို့ပြောရမည်လား တရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်လို့ပြောရမည်လားမသိ.. သေချာတာတခုကတော့ ကျမအတွက် ကျမမျှော်လင့်ထားသော ဘ၀တခု ပြိုလဲပျက်စီးခဲ့လေပြီ..။ ဘယ်သူမပြုမိမိမှုတဲ့ ကျမကြောင့်လို့ဘဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အပြစ်တင်ပါသည်။ ကျမအထိန်းအသိမ်းမတတ် မကိုင်တွယ်မဖြေရှင်းတတ်၍သာဖြစ်မည်…။
စိတ်ချယုံကြည်ပြီး ပျော်ရွှင်နေကြသည့် ကျမမိဘတွေကို မျက်နှာဘယ်လိုပြရမယ်မသိ..။ ခေါင်းမော့ရင်ကော့၍သာ ကျမ၏အောင်မြင်မှုကို အမိအဖတို့အားပြချင်ခဲ့သည်…ခုတော့..။ အမကြီးအားချစ်ခင်ရိုသေကြသော မောင်ငယ် ညီမငယ်များအားလည်း ရှေ့ဆောင်လမ်းပြမလုပ်နိုင်ခဲ့သည့် ကျမကိုကျမ ရှက်မိသည်..။ စိတ်အလိုမကျမှုဖြစ်တိုင်း ဖြေရှင်းပေးခဲ့သည့် ကျမ အကို ကိုလည်းအားနာမိသည်။ အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးခဲ့သည့် တမလွန်ဘ၀မှ အဖွားအား ကျမတောင်းပန်ပါသည်..။ ကျမကိုကြည့်၍လေးစားအားကျနေကြသော သူငယ်ချင်းများကိုအားနာသည်..။ ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရ မဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရသည့်ဘ၀မှာ ဖြစ်လာတဲ့အရာကိုဘဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားတော့မည်ဟုပင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်..။
ကျမ၏ဘ၀ကို ချနင်းခဲ့သော “သူ”နှင့် အခြားသူများ၏ဘ၀ကို ဖျတ်ဆီးခဲ့သော “သူမ”တို့အား ထာဝရစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်အောင် ဆုတောင်းပေးချင်ပါသည်..။ ကျမခံစားခဲ့ရသော စိတ်ဒုက္ခမျိုးအား ၀ဋ်မလည်စေချင်ပါ..။ ပူလောင်သောစိတ်ခံစားမှုမျိုးသည် ခံစားရသူသာအသိဆုံးဖြစ်ပေသည်..။ ကျမဘ၀၏ မကောင်းလှသော ဆိုးရွားလှသည့် ၀ဋ်ကြွေးအား ဒီဘ၀ ဒီမျှနှင့်သာ ကျေချင်ပါသည်..။ ဘုရားသွားတိုင်း ကုသိုလ်ပြုတိုင်းလည်း ဆုတောင်းပါသည်..။ ကျန်ရှိနေသေးသော သက်တမ်းအား ကျမတဦးတည်း ကောင်းမွန်စွာလျောက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက် ကျမအားမွေးရအုံးမည်ပင်..။
မှတ်ချက်။ ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ. အဖြစ်အပျက် ရင်တွင်းဖြစ်လေးပါ….. နင်တို.ဂေဇတ်မှာ တင်ပေးပါဆိုလို… ဒီပို.စ်လေးကို ဖတ်ပြီး လူတိုင်း သစ္စာတရားမြဲနိုင်ကြပါစေ…
အဲလာ တမီး ဟုတ်ဘူး နော် ပလိတ်သတ်ကြီးးးးးး
နာ့ နှယ်။ တိုက်တိုက်တို့ ဒါမိုးလည်း ရေးတတ်လှချည်လို့ ထင်တာ။
အိုအေ… သနားစရာကျုပ်တော့ သူတို.နှစ်ယောက်လုံးက ကျုပ်သယ်ရင်းတွေ.. အခုတော့ သက်သေလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ ကျုပ် တိုင်ပတ်နေတာ……တကယ်သနားစရာက ကျုပ် တော့ ကျုပ်…
အဲလိုမျိုးဆို သက်သေလိုက်တဲ့သူကို တရားစွဲလို့ရတယ်ဆိုသလား ကြားဖူးသလိုပဲ ..
တကယ့် အဖြစ်ဆိုရင်တော့ စိတ်မကောင်းစရာပါလား
အဲလိုအဖြစ်မျိုးတွေ အဲဒီထက်ဆိုးတာတွေ အပြင်လောကမှာ တကယ်ရှိပါတယ်။
ကြားနေမြင်နေရတယ်။ ဒီတစ်ယောက်ကမှ တရားဝင် ပြတ်ဆဲသေးတယ်။
တစ်ချို့ မိန်းကလေးမှာ တည်ပြီးသား အိမ်ထောင်လည်း မကွဲချင် ၊ ကလေးတွေမျက်နှာလည်း ရှိသေးတော့
မချစ်တော့သော်လည်း အောင့်ကာနမ်း ၊ ဒီယောင်္ကျားကို မကောင်းမှန်းသိသိရက်နဲ့
မျက်စိစုံမှိတ် နားကိုပိတ်ပြီး ရင်နာနာနဲ့ ဆက်ပေါင်းနေရသူတွေ အများကြီးပါ ..
susan khine says:
သများ တို့လို လှလှပပ ငို စမ်းပါ အေရယ်။
ဘယ်နဲ့ အာသီးမြင်ရအောင် အော်ငိုစရာလားးးး
ဟီးးးး ငိုတတ်ဝူး အိုက်လို…
နာကျင် နေတာတွေကို အားအင် အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး၊ ဆက်လျှောက်ရမဲ့ လမ်းကို အောင်မြင်ချောမွေ့ စွာလျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ လို့လဲ ဆုတောင်းပါတယ် ။
(ဒီပို့စ် ထဲက မောင်မဟုတ်ပါ)
တော်သေးတာပေါ့ အယ်ခိုးသံလေး ထည့်မခေါ်လို…….
ဟီးးးး ခွေးလွှတ် မင်းမော်ပု
: + cry + :
အော်…တူညားဒွေ ၀မ်းနဲနေဂျဘာဒယ်ဆို…Wow ကိုKZ က ကျူရှင်ပေးနေသေးတယ်..ဟိ
နောက်ဆို ပရောပါး ဝေး နဲ့ ဝမ်းနည်းတတ်အောင် အရင် သင်ရတာ။
မာမီအုပ် နဲ့ မီးမီးလေးနေကောင်းလား။
ကြည့်ရတာတော့ Sleepless Night တွေ နဲနဲ လာလောက်ပြီ ထင်ရဲ့။
Post အတွက်ဝေဖန်ရရင်တော့ ဒီလို လူကိုလက်တွဲလိုက်မိတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စမ်းစစ် ပြီး စောစောထဲက ဝေးလိုက်တာ ကံကောင်းတယ်မှတ်လိုက်ပါ။
ကိုယ့်ဘဝ မှာ ဒီလူမရှိလဲ ဘာမှမဖြစ်ဘူး ဆိုတာ ဖြစ်အောင် ပိုပြီးကြိုးစားလိုက်ရင် အရှုံးမရှိပါဘူး။
ဖြစ်ပြီးမှတော့ အတိတ်က သင်ခန်းစာယူဖို့သာရှိတာကိုး။
ဟုတ်ကဲ့အရီးရေ နေကောင်းပါတယ်ခင်ဗျ… အခုထိတော့ အိပ်ရေးမပျက်သေးပါဘူးခင်ဗျ..
သမီးက လ်ိမ္မာတယ်ဗျ.. ဟဲဟဲဟဲ..
ပို.စ်လေးကို ဝေဖန်ပေးလို.ကျေးဇူးပါ…. ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းလဲ ၀င်ဖတ်နေပါတယ်ဗျာ…
ကျမ၏ဘ၀ကို ချနင်းခဲ့သော “သူ”နှင့် အခြားသူများ၏ဘ၀ကို ဖျတ်ဆီးခဲ့သော “သူမ”တို့အား ထာဝရစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်အောင် ဆုတောင်းပေးချင်ပါသည်..။ ကျမခံစားခဲ့ရသော စိတ်ဒုက္ခမျိုးအား ၀ဋ်မလည်စေချင်ပါ..။ ပူလောင်သောစိတ်ခံစားမှုမျိုးသည် ခံစားရသူသာအသိဆုံးဖြစ်ပေသည်..။ ကျမဘ၀၏ မကောင်းလှသော ဆိုးရွားလှသည့် ၀ဋ်ကြွေးအား ဒီဘ၀ ဒီမျှနှင့်သာ ကျေချင်ပါသည်..။ ဘုရားသွားတိုင်း ကုသိုလ်ပြုတိုင်းလည်း ဆုတောင်းပါသည်..။
အဲဒီစိတ်ကို လုံးဝကို မကြိုက်ဖူး…
သည်းခံတာနဲ့..ခွင့်လွှတ်တာနဲ့.. အဓိပ္ပါယ်မပေါက်.. ရောထွေးအရှုံးပေးနေပုံပေါ်လို့ပါ..။
ထိုက်သင့်တဲ့.. ကံ..ကံတူအကျိုးပေး… ရအောင်/ဖြစ်အောင် လူအား..လုပ်အားလေးရင်းပြီးလက်တွေ့ကျကျတုံ့ပြန်သင့်ကြောင်း…
ပါးသွားရိုက်လိုက်မယ်လေ… ဒဂျီး… ဖစ်ရင် ဒဂျီးရှင်းနော်
ဒါပြောတာပေါ့ သကြီးရာ.. ကျုပ်လဲ အဲလိုပြောထားတယ်……..
ခွင့်လွှတ်မရလို့ ခွဲခဲ့ ပြီးရင်မေ့လိုက်ပါလို့
မရှိခဲ့ မသိခဲ့ သူတွေလို နေနိုင်အောင်ကျိုးစားပါ
တံခွန်မရှိတဲ့ ဘုရား၊ အလံမရှိတဲ့ ရထား လို မိန်းခလေးတွေဟာ
မောင်တစ်ကျိပ်ပင်ရှိသော်ငြား လင်သားမရှိရင် မတင့်တယ်ချေဘူးတဲ့
အလံမရှိလဲ ရွှေရထားဆို တင့်တယ်ပြီးသားပါနော်…
ဒါကြောင့် အရင်ကထက် ပိုကြိုးစားလို့ အောင်မြင်တဲ့ ဘ၀ ပိုင်ရှင် မိန်းမသားအဖြစ်
ဟုတ်ကဲ့အစ်မ သူက ဖတ်ပြီး အစ်မကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့.. မအိပြောသလို ကြိုးစားနေပါတယ်တဲ့.. နော်…
အန်တီမအိကို သားသား မင်းမောဂွမ်းက ကျေးဇူး……
မောင် နဲ့ ကို
အဲဒါ ကျွန်တော် မဟုတ်ဘူးနော်။
ဘယ်လို ခေါ်မယ်ဆိုတာ မသိရသေး
ဟဲ့ကောင်လေး လို့ ခေါ်တာ
အား​လျော့တာ​တော့ … အားမ​ပေးဘူး
စောစောအကြောင်းသိတော့လဲစောစောဘ၀သစ်ပြန်စနိုင်တယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပေါ့။ မဟုတ်လို့ကတော့ တဘ၀လုံးဒုတ်ခပေးနေရင်မလွယ်ဘူး။ တခါတဲသာသံယောဇဉ်ဖြတ် နောက်ပြန်လှည့်မကြည့်ပဲ ကိုယ့်ဘ၀ပိုကောင်းအောင်ဆက်လျှောက်။ ရက်စက်သူတွေအတွက်ကိုယ့်ခံစားချက်အပွန်းမခံနဲ့ပေါ့။